ငေးမောမိနေစေမယ့် အလှပဆုံးတိရိစ္ဆာန်အကောင် (၂၀) - ONE DAILY MEDIA
ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များ၏ သဘာဝအလှသည် အမြဲတမ်း စိတ်လန်းဆန်း‌ေစပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များ၏ အလှတရားကို ရှာဖွေပြီး ပုံဖော်ရန် ကြိုးစားသည့် ပထမဆုံးလူများထဲမှ တစ်ဦးမှာ ဂျာမန်အနုပညာရှင် Albrecht Dürer ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ တိရစ္ဆာန်များအား ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည် ရေပန်းအစားဆုံး အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အလှဆုံးနှင့်အကောင်းမွန်ဆုံး တိရစ္ဆာန်များ၏ ပုံများကို ရွေးချယ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
(၁) Mandarin fish
A post shared by Shane Hu (@mxyptplx)
တကယ်ကို လှပတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ သတ္တဝါကို သြစတြေးလျ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့အနီး ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားကျားဖြူ၏ထူးခြားသောအသွင်အပြင်သည် ပုံမှန်ဘင်္ဂလားကျားများ၏အမွေးကိုလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်စေသည့် pheomelanin ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းချို့တဲ့မှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျားဖြူများသည် လိမ္မော်ရောင်များထက် ပိုမိုကြီးထွားမြန်ပြီး ပိုလေးသည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
ဒီသတ္တဝါကို သစ်ရွက်ခြောက်ပင်လယ်နဂါးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ တောင်သြစတြေးလျပြည်နယ်၏ ပင်လယ်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
ဤတောင်အမေရိကကြက်တူရွေးသည် ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်ဖြင့်သာမက စကားပြောစွမ်းရည်ကြောင့်ပါ ထူးခြားပါတယ်။
A post shared by Ben Sheldon (@shel1983)
ဤလိပ်ပြာသည် လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသော အတောင်ပံများပါရှိသောကြောင့် ဤသို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏စပိန်အမည်မှာ “espejitos” ဖြစ်ပြီး “သေးငယ်သောကြေးမုံ” ဟုပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fleck, an Arctic Fox, relaxes in the snow at the Wildwood Trust near Canterbury in Kent, after another night of snow across the south-east of England, Wednesday December 28, 2005. Up to six inches of snow and below-freezing temperatures are expected to hit some parts of the country today as the wintery weather is predicted to worsen. See PA story WEATHER Snow. PRESS ASSOCIATION Photo. Photo credit should read: Gareth Fuller/PA. (Photo by Gareth Fuller – PA Images/PA Images via Getty Images)
ဤမြေခွေးငယ်လေးသည် အာတိတ်ဒေသများတွင် နေထိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထူထဲသော နွေးထွေးပြီး လှပသော သားမွေးများကို အန္တရာယ်မှဖုံးကွယ်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
တောက်ပသောအရောင်ရှိသော ဤငှက်ကို ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားငှက်အဖြစ် လူသိများပါတယ်။
Fire salamander များသည် ဥရောပရှိ အကျော်ကြားဆုံး ပုတ်သင်မျိုးစိတ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ ထူးထူးခြားခြား တောက်ပသော အရောင်ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်။
ဒီသားကောင်ငယ်လေးဟာ တကယ့်သဲကန္တာရထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ခုတည်းသောကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်အသွေးစုံသော ဤသတ္တဝါဟာ အလယ်ပိုင်း အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသ၏ အပူပိုင်းရေပြင်တွင် နေထိုင်သည့် ပင်လယ်မျှော့တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁) Lilac-breasted roller
အာဖရိကမှ ဤငှက်ကလေး၏ အရောင်ဟာ ထူးထူးခြားခြား တော့ မဟုတ်လှပါဘူး။
၎င်းတို့၏ထူးခြားသောအစက်အပြောက်အမွေးများသည် Amur Leopard ကို အလှဆုံးဖြစ် စေသလို ကံမကောင်းစွာဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမဲလိုက်ခံရဆုံး ကျားသစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။
A post shared by Gavin Crossley (@gavcrossley)
ဤဩစတြေးလျတိရစ္ဆာန်သည် အမြဲလိုလို ပြုံးရွှင်နေသကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်အရှိဆုံးဟု မကြာခဏပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဤငှက်၏အမည်မှာပင် ၎င်း၏ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်၊၊ ၎င်းသည် ပေါ်တူဂီစကားလုံး “flamengo” မှဆင်းသက်လာပြီး “မီးရောင်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်
(၁၅) ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အနီရောင်မြွေ
ဤမြွေကို ကယ်လီဖိုးနီးယားတစ်ခွင်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်း၏အရေပြားအရောင်ပေါင်းစပ်မှုမှာ မတူညီသောနေရာများတွင် ကွဲပြားသော်လည်း အမြဲတမ်း အလွန်တောက်ပနေပါတယ်
အိုကာပီကို သည် “တောသစ်ကုလားအုတ်” သို့မဟုတ် “မြင်းကျားသစ်ကုလားအုတ်” အဖြစ် ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ၎င်းသည် သစ်ကုလားအုတ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်သော်လည်း မြင်းကျားတစ်ကောင်ကဲ့သို့ အစင်းကြောင်းများ ပါပြန်ပါတယ်။
ဤတောကြောင်သည် ၎င်း၏တောက်ပသောမျက်လုံးများနှင့် နားရွက်ထိပ်များတွင် ပေါက်နေသော အမွှေးစုလက္ခဏာများကြောင့် လူသိများပါတယ်
NEW YORK, NY – JANUARY 25: Snowy owl seen at the Bronx Zoo on January 25, 2016 in New York City. (Photo by James Devaney/WireImage)
ဒီငှက်ကလေးရဲ့ အသွင်အပြင်က တကယ်ကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။
ဤရေနေနို့တိုက်သတ္တဝါသည် လှပရုံသာမက ဉာဏ်ရည်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။
(၂၁) တောက်ပသော Quetzal
A post shared by >>© Mauro Roman Nature Photo<< (@mauro_roman_nature_photo_)
ဤရောင်စုံအလှကို တောင်အမေရိကတွင်သာ တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ
(၂၂) Secretary ငှက်
A post shared by Rudi Luyten (@luytenrudi)
ဤရွေးချယ်မှုတွင် သင်နှစ်သက်သော သက်ရှိသတ္တဝါများ ပါပါသလား ? မှတ်ချက်များတွင် အလှဆုံး “တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ” ၏ပုံများကို မျှဝေခဲ့ပါဦး။
သင့်နှလုံးသားကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သိမ်းပိုက်သွားနိုင်မည့် ခွေးလေးများ